Bit By Bit - Mifehy - 6.6.2 fahatakarana sy Mpitantana fampahafantarana doza
Information doza no tena mety amin'ny fiaraha-monina mahazatra fikarohana; fa efa nitombo be; ary izany dia ny sarotra mety hahatakatra.
Ary ny faharoa ho an'ny fiaraha-monina etika fanamby taona nomerika fampahafantarana fikarohana dia mety, ny mety ho ratsy avy amin'ny fampiharihariana ny vaovao (Council 2014) . Fampahafantarana hanimba avy amin'ny fampiharihariana ny hevitry ny mombamomba mety ho ara-toekarena (ohatra, very asa), ara-tsosialy (ohatra, menatra), ara-tsaina (ohatra, fahaketrahana), na heloka bevava (ohatra, ny fisamborana ny fitondran-tena tsy ara-dalàna). Indrisy anefa, ny taona nomerika vaovao kokoa mety be-misy be dia be fotsiny fanazavana fanampiny momba ny fitondran-tena. Ary, fampahafantarana mety efa voaporofo tena sarotra ny mahatakatra sy mifehy ny ampitahaina amin'ny loza izay olana eo amin'ny fiaraha-monina taona Analog fikarohana, toy ny ara-batana mety. Mba hahitana ny fomba kokoa ny vanim-potoana nomerika fampahafantarana mety, diniho ny tetezamita avy amin'ny taratasy firaketana an-tsoratra ara-pitsaboana ho elektronika. Samy mamorona karazana rakitsoratra mety, fa ny elektronika be rakitsoratra mamorona loza lehibe kokoa satria amin'ny ambaratonga goavana dia azo mifindra ho amin'ny tsy nahazoan-dalana antoko na natambatra tamin'ny rakitsoratra hafa. Mpikaroka ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika efa mihazakazaka olana tamin'ny fampahafantarana doza, amin'ny ampahany, satria tsy tanteraka izy ireo hahatakatra ny fomba ho refesina sy mitantana izany. Noho izany, handeha aho mba hanolotra fomba iray manampy ny mieritreritra momba ny fampahafantarana mety, ary avy eo aho handeha hanome torohevitra anao ny sasany noho ny fomba fitantanana ny fampahafantarana mety eo amin'ny fikarohana sy ny angon-drakitra mba hanafahana mpikaroka hafa.
Ny fomba iray izay mpikaroka ara-tsosialy mety hihavitsy fampahafantarana dia "anonymization" ny angona. "Anonymization" dia ny fanesorana ny dingana mazava identifiers manokana toy ny anarana, adiresy, ary ny antso an-tariby avy amin'ny tahirin-kevitra maro. Na izany aza, io no be fomba tsy mahomby noho ny maro ny olona mahatsapa, ary izany, raha ny marina, lalina ary ifotony voafetra. Noho izany antony izany, isaky ny milaza "anonymization," hampiasa teny nindramina aho marika mba hampahatsiahy anareo fa ity dingana ity miteraka ny endriky ny anarana fa tsy ny tena anarana.
Ny ohatra mazava tsara ny amin'ny tsy fahombiazan'ny "anonymization" dia avy amin'ny faramparan'ny taona 1990 tany Massachusetts (Sweeney 2002) . Ny Vondrona Insurance Commission (GIC) dia governemanta nividy sampan-draharaha miandraikitra ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra. Amin'ny alalan'ny asa io, ny GIC-tsipiriany nanangona firaketana an-tsoratra ara-pahasalamana mikasika ny mpiasa-panjakana an'arivony. Ao anatin'ny ezaka mba handrisihana fikarohana momba ny fomba hanatsarana fahasalamana, GIC nanapa-kevitra ny handefa ireto rakitsoratra ireto ny mpikaroka. Na izany aza, tsy mizara ny angon-drakitra rehetra; fa, izy ireo "manafina anarana" izany amin'ny alalan'ny fanesorana vaovao toy ny anarana sy ny adiresy. Na izany aza, dia navelany hafa vaovao fa nieritreritra mety ho ilaina ho an'ny mpikaroka toy ny isan'ny mponina vaovao (kaody positaly, daty nahaterahana, ny foko, sy ny firaisana ara-nofo) sy ny mpitsabo vaovao (fitsidihana tahirin-kevitra, fitiliana, fomba) (Sary 6.4) (Ohm 2010) . Indrisy anefa, io "anonymization" dia tsy ampy mba hiarovana ny angon-drakitra.
Sary 6.4: "Anonymization" dia ny fanesorana ny dingana mazava ho azy fa famantarana vaovao. Ohatra, rehefa namoaka ny fitsaboana fiantohana ny tantaran'ny fanjakany mpiasa ny Massachusetts Group Insurance Commission (GIC) nesorina anarana sy adiresy avy amin'ny tahiry. I mampiasa nalaina manodidina ny teny hoe "anonymization" satria ny dingana dia manome ny endriky ny anarana, fa tsy tena anarana.
Indro misy ohatra ny fahadisoana ny GIC "anonymization", Latanya Sweeney-dia nahazo diplaoma ny mpianatra ao amin'ny MIT-karama $ 20 mba hahazoana ny fifidianana firaketana an-tsoratra avy any an-tanànan'i Cambridge, Massachusetts ny tanàna niaviany ny governora William Weld. Ireo fifidianana firaketana ahitana vaovao toy ny anarana, adiresy, kaody positaly, daty nahaterahana, ary ny vavy. Ny zava-misy fa ny tahirin-kevitra ara-pitsaboana sy ny mpifidy fichier rakitra nizara saha-kaody positaly, daty nahaterahana, ary ny firaisana ara-nofo-Midika izany fa afaka manana rohy mankany Sweeney azy ireo. Sweeney fantany fa Weld ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Jolay 31, 1945, sy ny fifidianana ihany no firaketana an-tsoratra enina olona tafiditra ao Cambridge amin'izany andro nahaterahana. Ankoatra izany, ireo olona enina, afa-tsy ireo telo lahy. Ary, ireo telo lahy, iray ihany no nizara ny kaody positaly Weld. Noho izany, ny antontan-kevitra fifidianana nampiseho fa na iza na iza ao amin'ny tahirin-kevitra ara-pitsaboana amin'ny Weld ny fitambaran'ny ny daty nahaterahana, lahy na vavy, sy ny kaody positaly i William Weld. Raha ny marina, ireo vaovao sekely telo nanome tondro iray tsy manam-paharoa ho azy tao amin'ny tahirin-kevitra. Mampiasa izany zava-misy, Sweeney toerana dia afaka ny fitsaboana Weld tantara, ka mba hampahafantarana azy taminy izy ireo Feat, dia nanoratra ho azy ny dika mitovy ny rakitsoratra (Ohm 2010) .
Figure 6.5: Re-idenification ny "manafina anarana" angona. Latanya Sweeney mitambatra ny "manafina anarana" firaketana an-tsoratra ara-pahasalamana amin'ny fifidianana firaketana mba hahita ny fitsaboana tantaran'ny Governora William Weld (Sweeney 2002) .
Sweeney ny asa maneho ny fototra rafitry ny de-anonymization fanafihana -mba hanaraka ny teny avy amin'ny solosaina fiarovana ny fiaraha-monina. Ao ireo fanafihana, angon-drakitra roa karazana, na izay mitokana mampiseho vaovao saro-pady, no mifandray, ary amin'ny alalan'ny linkage izany, saro-pady vaovao no sarona. Amin'ny lafiny sasany ity dingana ity dia mitovy amin'ny fomba Baking soda sy ny vinaingitra, zavatra roa izay mitokana mampidi-doza, azo mitambatra hamokatra ny nasty vokatra.
Ho valin'ny Sweeney ny asa, ary ny hafa mifandray asa, ny mpikaroka ankehitriny amin'ny ankapobeny hanala be fanazavana fanampiny-rehetra antsoina hoe "manokana Inona no Atao hoe Information" (PII) (Narayanan and Shmatikov 2010) -during ny dingana ny "anonymization." Ankoatra izany, maro ny mpikaroka ankehitriny mahatsapa fa nisy data-toy ny firaketana an-tsoratra ara-pitsaboana, ara-bola firaketana, valin'ireo fanontaniana fanadihadiana momba ny fitondran-tena tsy ara-dalàna-dia saro-pady loatra angamba ny handefa na dia taorian'ny "anonymization." na izany aza, vao haingana kokoa ohatra izay mamaritra aho etsy ambany dia maneho fa ny mpikaroka ara-tsosialy mila hanova ny fomba fisainany. Amin'ny maha-dingana voalohany, dia fahendrena ny mihevitra fa ny rehetra dia mety fantatra angon-drakitra ary antontan-kevitra rehetra dia mety saro-pady. Amin'ny teny hafa, fa tsy hieritreritra hoe mety fampahafantarana mihatra amin'ny kely subset ny tetikasa, dia tokony hieritreritra fa mihatra-amin'ny ankapobeny, ny tetikasa rehetra.
Samy lafiny io re-fironana dia aseho ny Netflix loka. Araka ny voalaza tao amin'ny Toko faha 5, Netflix namoaka naoty 100 tapitrisa sarimihetsika nomen'ny efa ho 500.000 ny mpikambana, ka nanana antso misokatra izay olona avy amin'ny manerana izao tontolo izao nanaiky algorithms izay mety hanatsara ny fahaizany Netflix ny fahazoan-dalana hidirana filma. Talohan'ny namoaka ny angon-drakitra, Netflix nanaisotra izay mazava ho azy fa famantarana manokana-baovao, toy ny anarana. Netflix kosa nandeha ny dingana fanampiny sy nampiditra perturbations kely ao ny sasany amin'ireo rakitsoratra (ohatra, ny fanovana ny sasany naoty avy amin'ny 4 kintana ho 3 kintana). Netflix ela dia hita, na izany aza, fa na dia teo aza ny ezaka, ny antontan-kevitra dia tsy midika hoe tsy mitonona anarana.
Vao tapa-bolana taorian'ny navotsotra ny antontan-kevitra Narayanan and Shmatikov (2008) nampiseho fa azo atao ny mianatra momba manokana ny sarimihetsika ny olona tiany. Ny fitaka ny indray famantarana fanafihana dia mitovy amin'ny Sweeney ny: mampiray miara loharanom-baovao roa, ny iray amin'ny vaovao saro-pady mety sy tsy mazava ho azy fa vaovao famantarana sy izay mirakitra ny mombamomba ny olona. Tsirairay ireo dia mety ho loharanon-kevitra angon-drakitra tsirairay azo antoka, fa rehefa izy ireo mitambatra ny natambatra dia afaka mamorona fampahafantarana dataset mety. Kanefa kosa raha ny amin'ny Netflix angon-drakitra, eto ny fomba mety hitranga. Aoka hatao hoe aho misafidy ny hizara ny eritreritro momba ny asa sy ny hatsikana sarimihetsika miaraka amin'ny mpiara-miasa, fa aleoko tsy mba hizara ny hevitro momba ny ara-pivavahana sy ara-politika sarimihetsika. Ny mpiara-miasa dia afaka mampiasa ny vaovao izay efa nizara azy ireo hahita ny firaketana ao amin'ny Netflix angona; ny vaovao izay hizara mety ho tsy manam-paharoa toy William tondro Weld ny daty nahaterahana, kaody positaly, ary ny firaisana ara-nofo. Avy eo, raha mahita ny tsy manam-paharoa ao amin'ny tahirin-kevitra tondro, dia afaka mianatra ny naoty momba ny filma rehetra, anisan'izany ny sarimihetsika izay mifidy ny tsy handray anjara. Ankoatra izany karazana kinendry fanafihana mifantoka amin'ny olona iray, Narayanan and Shmatikov (2008) koa dia nampiseho fa azo atao ny manao fanafihana malalaka -Olona iray momba ny olona maro-by Nampitambatra ny Netflix amin'ny tahirin-kevitra manokana sy sarimihetsika ampy tahirin-kevitra fa ny sasany ny olona efa nisafidy ny lahatsoratra amin'ny Internet Movie Database (IMDb). Izay mety ho fanazavana izay manam-paharoa tondro ny olona iray manokana, na ny hametraka ny sarimihetsika naoty-azo ampiasaina mba hamantatra azy ireo.
Na dia ny Netflix angon-drakitra azo indray fantatra in na ny lasibatra na malalaka fanafihana, mbola Mety toa tsy mety kely. Rehefa dinihina tokoa, sarimihetsika naoty tsy toa tena saro-pady. Na dia mety ho marina amin'ny ankapobeny, fa ny sasany tamin'ireo olona 500.000 ao amin'ny dataset, sarimihetsika naoty Mety ho tena saro-pady. Raha ny marina, ho valin 'ny de-anonymization ny vehivavy miray amin'ny vehivavy closeted vehivavy nanatevin-daharana ny kilasy-hetsika palitao an'i Netflix. Toy izao ny fomba Naneho ny olana dia ny fitoriana (Singel 2009) :
"[M] ovie sy ny antontan-kevitra mirakitra fanazavana ampy kokoa ny tena manokana sy ny maha saro-pady [sic]. Ny mpikambana dia mampibaribary ny sarimihetsika tahirin-kevitra iray mpikambana Netflix ny tombontsoa manokana sy / na ny tolona isan-karazany tena olana manokana, anisan'izany ny firaisana ara-nofo, aretin-tsaina, sitrana avy misotro toaka, ary ho voa avy amin'ny firaisana amin'olom-pady, fampijaliana ara-batana, herisetra an-tokantrano, ny fanitsakitsaham-bady, ary ny fanolanana. "
Ny de-anonymization ny Netflix Loka tahirin-kevitra mampiseho fa na dia mety angon-drakitra rehetra fantatra sy ny tahirin-kevitra rehetra dia mety saro-pady. Tamin'izay fotoana izay, dia mety mieritreritra fa izany ihany no mihatra amin'ny tahirin-kevitra izay izany purports ho ny olona. Mahagaga, izay tsy ny raharaha. Ho valin'ny ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao Lalàna fangatahana, ny New York City Governemanta namoaka rakitsoratra rehetra fiarakaretsaka mitaingina tany New York tamin'ny 2013, anisan'izany ny pickup sy Mitete eny fotoana, toerana, ary ny saran-dalana vola (Tadidio avy Chapter 2 fa Farber (2015) nampiasa izany tahirin-kevitra mba hizaha toetra manan-danja amin'ny asa teoria toe-karena). Na dia izany angon-drakitra momba ny fiarakaretsaka fitsangatsanganana toa mahasoa satria tsy toa ho vaovao momba ny olona, ​​Antony Tockar takany fa raha ny marina io dataset fiarakaretsaka ao maro mety vaovao saro-pady momba ny olona. Indro misy ohatra, dia nijery fitsangatsanganana rehetra manomboka amin'ny The Hustler Club-lehibe esory ao New York Club-eo amin'ny misasakalina sy ny 6am ary avy eo hita ny rano indray mitete-eny toerana. Ity fikarohana naseho-amin'ny ankapobeny-ny lisitry ny adiresin'ireo olona sasany, izay mpandehandeha The Hustler Club (Tockar 2014) . Sarotra ny mieritreritra fa nisy ny tanàna ny governemanta ao an-tsaina izany rehefa namoaka ny tahirin-kevitra. Raha ny marina, io teknika azo nampiasaina mba hahita ny trano adiresin'ireo olona mitsidika toerana misy ao an-tanàna ny fitsaboana-toeram-pitsaboana, ny governemanta trano, na fikambanana ara-pivavahana.
Ireo roa tranga-ny Netflix loka sy ny New York City fiarakaretsaka angona-mampiseho fa somary mahay ny olona tsy mba tsara Tombanan'ny ny fampahafantarana mety ao amin'ny tahirin-kevitra fa izy ireo nafahana, ary ireo tranga dia tsy midika hoe tsy manam-paharoa (Barbaro and Zeller Jr 2006; Zimmer 2010; Narayanan, Huey, and Felten 2016) . Ankoatra izany, maro ireo toe-javatra, ny olana mbola tahirin-kevitra amin'ny aterineto maimaim-poana, milaza ny fahasarotan'ny mandrakizay haverin'Andriamanitra ny angon-drakitra famoahana. Miaraka ireo ohatra ireo-ary koa ny fikarohana ao amin'ny solosaina ny siansa momba ny fiainana manokana-Mitondra any amin'ny iray manan-danja teny famaranana. Ny mpikaroka dia tokony hilaza fa tahirin-kevitra rehetra dia mety fantatra sy tahirin-kevitra rehetra dia mety saro-pady.
Indrisy anefa, tsy misy vahaolana tsotra ny zava-misy fa dia mety angon-drakitra rehetra fantatra sy tahirin-kevitra rehetra dia mety saro-pady. Na izany aza, fomba iray hampihenana vaovao loza ianao raha miasa miaraka amin'ny angon-drakitra dia ny mamorona sy hanaraka ny angona fiarovana drafitra. Izany drafitra dia mihena ny vintana fa ny tahirin-kevitra dia niparitaka ary hampihena ny ratsy raha misy niparitaka sao mitranga. Ny antsipiriany ny angona fiarovana ny drafitra, toy izay amin'ny teny encryption ampiasaina, dia hiova rehefa mandeha ny fotoana, fa ny UK Data Services manampy tokoa ilay mikarakara ny singa ny angona fiarovana drafitra ho 5 sokajy iantsoany ny 5 safes: azo antoka tetikasa, azo antoka ny olona , azo antoka toe-javatra, tahirin-kevitra azo antoka, ary azo antoka outputs (Table 6.2) (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) . Tsy misy ny dimy safes tsirairay manome fiarovana tanteraka. Nefa, miara-mamorona mahery izy ireo hametraka ny lafin-javatra izay afaka hampihena fampahafantarana mety.
Table 6.2: Ny 5 safes no fitsipika hitondrana fampianarana sy ny fanatanterahana ny drafitra fiarovana angona (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) .
Safe tetikasa mametra tetikasa miaraka amin'ny angon-drakitra ho an 'ireo izay etika
Safe ny olona voafetra ny fidirana dia amin'ny olona izay azo itokisana amin'ny tahirin-kevitra (ohatra, ny olona efa niaritra etika fampiofanana)
Safe tahirin-kevitra tahirin-kevitra dia de-fantatra sy aggregated ny azo atao
Safe Fikirana antontan-kevitra voatahiry ao amin'ny solosaina dia amin'ny mety ara-batana (ohatra, mihidy efitrano) sy ny rindrambaiko (ohatra, ny tenimiafina fiarovana, misy mari-pamantarana) ny fiarovana
Safe output fikarohana output dia nandinika mba tsy nahy banga ny fiainana manokana
Ankoatra ny fiarovana ny angon-drakitra, raha mampiasa azy io, dingana iray eo amin'ny dingana fikarohana izay mety indrindra fampahafantarana salient dia angon-drakitra fizarana amin'ny hafa mpikaroka. Data fizarana eo amin'ny mpahay siansa no fototry ny Siantifika vidin'ny ezaka, ary indrindra ny foto-drafitrasa fampandrosoana ny fahalalana. Toy izao ny fomba ny UK Tranon'ny Commons namariparitra ny maha zava-dehibe ny angona ny fizarana;
"Access ny tahirin-kevitra dia fototra, raha ny mpikaroka dia ny hiteraka, manamarina sy hanorina ny vokatra izay voalaza ao amin'ny boky sy gazety. Tsy maintsy ho ny heverina fa, raha tsy misy antony mahery raha tsy izany, dia tokony ho tsara angon-drakitra ary nanao ampahibemaso nampahafantatra misy. Mifanaraka izany fitsipika, izay azo atao, tahirin-kevitra mifandray amin'ny fikarohana novatsian'ny ampahibemaso rehetra dia tokony ho be sy maimaim-poana. " (Molloy 2011)
Na izany aza, amin'ny alalan'ny fizarana ny tahirin-kevitra amin'ny hafa mpikaroka, dia mety ho tsy mitsaha-mitombo fampahafantarana mety ny mpandray anjara. Noho izany, dia mety toa ny mpikaroka izay maniry ny hizara ny data-na no takiana mba hizara ny data-Miatrika ny fototra fihenjanana. Amin'ny lafiny iray dia manana etika maintsy hizara amin'ny hafa ny tahirin-kevitra ny mpahay siansa, indrindra fa raha tany am-boalohany no ampahibemaso fikarohana famatsiam-bola. Na izany aza, tamin'izany andro izany, mpikaroka manana etika maintsy hampihenana, araka izay azo atao, ny vaovao doza ny mpandray anjara.
Soa ihany fa tsy olana izany ho mafy toy ny hita. Zava-dehibe ny mieritreritra ny tahirin-kevitra miaraka mizara ny fitohi- avy amin'ny tsy misy angona fizarana handefa sy hanadino, izay tahirin-kevitra no "manafina anarana", ary navoaka ho an'ny olona ny miditra (Sary 6.6). Samy ireo toerana tafahoatra manana risika sy tombontsoa. Izany hoe, tsy avy hatrany ny tena zava-etika mba tsy mitovy ny angona; izany fomba maro mety manala soa ny fiaraha-monina. Niverina tsy hanandran-javatra, Ties, sy Time, ohatra noresahina tao amin'ny toko teo aloha, hevitra manohitra angona famoahana izay mifantoka afa-tsy amin'ny mety hanimba sy izay tsy miraharaha azo atao be loatra soa dia iray-rindrina; Aho mamaritra ny olana amin'ny iray-manenjika io, be loatra fomba fiarovana amin'ny an-tsipiriany ao ambany rehefa manolotra torohevitra momba ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ny tsy fahazoana antoka (sampana 6.6.4).
Figure 6.6: Data paikady famoahana afaka latsaka eny amin'ny fitohi-. Izay tokony ho eny fitohi- ity dia miankina amin'ny tsipiriany manokana ny tahirin-kevitra. Amin'ity tranga ity, ny famerenana ny antoko fahatelo dia mety hanampy anao hanapa-kevitra ny mety mandanjalanja ny loza, ary handray soa amin'ny raharaha.
Ankoatra izany, ao amin'ny eo anelanelan 'ireo toe-javatra tafahoatra no aho hoe mimanda zaridaina fomba izay tahirin-kevitra io dia ifampizarana amin'ireo olona izay mihaona sasany fepetra sy izay manaiky ho fehezin'ny fitsipika sasany (ohatra, mpiandraikitra avy amin'ny IRB sy ny antontan-kevitra fiarovana ny drafitra) . Io zaridaina mimanda dia manome fomba maro ny soa azo avy amin'ny fanafahana sy manadino amin'ny tsy mety. Mazava ho azy, ny fomba zaridaina mimanda miteraka fanontaniana maro-izay tokony hanana fahafahana miditra, eo ambanin'ny toe-javatra inona, Mandra-pahoviana, izay tokony handoa ny foana sy ny mpitandro filaminana ny mimanda saha sns, fa izy ireto no tsy hay resena. Raha ny marina, any no misy efa miasa eo amin'ny toerana mimanda zaridaina izay mpikaroka dia afaka ampiasaina dieny izao, toy ny angona tahiry ao amin'ny Inter-Oniversiten'i niforona ny fiarahana misalahy ho an'ny fikarohana politika sy sosialy any amin'ny Oniversiten'i Michigan.
Noho izany, aiza no tokony ny tahirin-kevitra avy amin'ny fianarana ho amin'ny fitohi- ny tsy fifampizaràna, mimanda saha, dia halefako sy manadino? Tsy miankina amin'ny antsipiriany ny angona; mpikaroka dia tsy maintsy mandanjalanja ny fanajana ny olona, ​​Beneficence, Fahamarinana, sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest. Rehefa ilaina fanombanana mahay mandanjalanja ny fanapahan-kevitra hafa mpikaroka mitady ny toro-hevitra sy ny fankatoavan'ny IRBs, sy angona famoahana fotsiny dia mety ho faritra hafa izany dingana. Amin'ny teny hafa, na dia ny olona sasany mihevitra ny famoahana tahirin-kevitra toy ny etika morass antenaina intsony, isika, efa manana rafitra ao an-toerana mba hanampy ny mpikaroka hampifandanjana ireo karazana etika Miteraka.
Fomba iray farany ny mieritreritra momba ny antontan'isa fizarana dia amin'ny alalan'ny fampitahana. Isan-taona fiara no tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'olona an'arivony, fa tsy hanandrana ny fandraràna mitondra fiara. Raha ny marina, toy izany antso mba handraràna mitondra fiara ho mitombina, satria mitondra fiara ahafahan'ny zava-mahagaga maro. Kosa, ny fiaraha-monina dia mametraka famerana amin'ny iza no handroahako (ohatra, mila ho iray taona, no lasa mila fitsapana sasany) ary ny fomba ahafahan'izy ireo fiara (ohatra, ny hafainganam-pandeha eo ambanin'ny fetra). Fiaraha-monina ihany koa ny olona nokaramaina amin'ny fampiharana ireo fitsipika (ohatra, polisy), ary hovaliako ny olona izay tratra manitsakitsaka azy ireo. Io ihany karazana fisainana voalanjalanja izay mifehy ny fiaraha-monina mihatra amin'ny mitondra fiara Azo ampiharina amin'ny angon-drakitra fizarana. Izany hoe, fa tsy manao absolutist hevitra fa na manohitra angona fifampizaràna, mihevitra aho fa ny lehibe indrindra amin'ny soa ho avy mahafantapantatra hoe ahoana ahafahantsika mizara kokoa ny tahirin-kevitra kokoa ny soa aman-tsara.
To hanatsoaka hevitra, fampahafantarana mety efa nitombo be, ary izany dia tena sarotra ny milaza sy refesina. Noho izany, dia tsara ny mieritreritra hoe angon-drakitra rehetra dia mety fantatra ary mety saro-pady. Mba hampihenana fampahafantarana mety rehefa manao fikarohana, mpikaroka dia afaka mamorona sy manaraka ny drafitra fiarovana angona. Ankoatra izany, fampahafantarana mety tsy misakana ny mpikaroka avy amin'ny fizarana tahirin-kevitra miaraka amin'ny mpahay siansa hafa.